Shacabka Kenya oo u istaagay inay iska caabbiyaan Al-Shabaab – Radio Muqdisho
Shacabka Kenya oo u istaagay inay iska caabbiyaan Al-Shabaab
Masuuliyiinta Gobolka Waqooyi bari ee Dalka Kenya ayaa wada olole Hubeysan oo lagu abaabulayo Dhallinyarada degaannadaasi, si ay isaga difaacaan weerarrada kaga yimmaadda Ururka Al-Shabaab.
Senotar, Yuusuf Xaaji oo laga soo doorta Koofurta Gaarrisa ayaa mar uu la hadlayay Dhallinyarada degaanka wuxuu sheegay inay abaabul ugu jiraan sidii ay isaga caabbin lahaayeen Al-shabaab, wuxuuna Bulshada halkaasi ku dhaqan u tilmaamay in haddii ay Guryahooda ku dhintaan ay shahiid yihiin, sidaa daraaddeedna ay u soo jeestaan dagaal ka dhan ah argagixisada.
“Laasim waa inaan Gabdhaha naha aynaan ka cararin, ma aqbalayno, annagoo dhimanna ayaa taasi noo dhaanta, sharcigana wuxuu qabaa in Qofkii loogu yimmaadda ee ku dhinta uu yahay Shahiid”, ayuu yiri Senotar Yuusuf.
Dhinaca kale war bixin ay dhawaan soo saartay hay’adda ka hortagga shaqaaqooyinka caalamka ee ICG (International Crisis Group) oo lagu daabacay Wargeyska Daily Nation, ayaa waxay ku sheegtay in ay hoos u dhaceen weerradii ay Al-shabaab ka geysan jireen Nairobi iyo Mombasa Kenya.
War bixinta ICG oo lagu xusayay Sanad guuradii Shanaad ee kasoo wageegatay weerarkii lagu qaaday Westgate Mall ee Magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu sheegay in wixii ka dambeeyay 2015- kii ay Al-Shabaab wadeen olole ay Dhallinyarada ku nool Gobollada Xeebta iyo Waqooyi Bari Kenya ay ku qoranayaan, iyadoo ay taasina meesha ka saartay markii ay da’ yartu u hoggaansameen wacyi gelinta Culimada, wax garadka iyo madaxda Dowladda.
Wafdiga ka socda Aqalka sare oo Baydhabo kula kulmay Golaha Wasiirada Maamulka K/Galbeed+Sawirro